Inbadan oo lamid ah ciyaarta cusub ee Rovio ee looyaqaano qaraxii shimbiraha careysan | Androidsis
Manuel Ramirez | | Shimbiraha cadhooday, burburi Candy, Ciyaaraha Android, Tababarada
Rovio wax badan ayuu doonayaa oo waxaan aragnay ciyaaro kala duwan oo isku dayay inay ka fogaadaan Shimbiraha Xanaaqsan, in kasta oo natiijo laga yaabo in aan sidaa looga fileyn daraasaddan ciyaarta fiidiyowga ah ee lagu helay shimbirahaas yar yar ee waalan astaamaha ugu kala fog. Shimbiraha careysan ee isticmaalay fiisigiska walxaha si wanaagsan loogu maamulay taleefanka casriga ah, si tartiib tartiib magac ugu yeeshaan adduunkan adag ee ciyaaraha fiidiyowga ah. Maxaa dhacaya markii aad leedahay halyeey gaar ah, xaaladdan shimbirahaas yar, waa inay adag tahay in wax badan la abuuro si loo helo liis weyn. Sababtaas awgeed ayaa ah hanka weyn ee Nintendo oo leh astaamo kala duwan oo uu ku weyn yahay Mario, kaas oo hadda ku jira muuqaal caan ah sida aad dhammaantiinba wada ogtihiin.
Qarxinta Birds waa Rovio ciyaarta fiidiyowga cusub ee keeneysa shimbiraha waalan ee mawduuc aan wada ognahay iyo sida wanaagsan ee ay ugu guuleysatay inay ku hesho dhammaan casiirkeeda Candy Crash Saga. Xanaaqa shimbiraha careysan waa ciyaar xujo aad u kobcinaysa muuqaal muuqaal iyo muuqaal leh waana taasi nuqul u dhow ciyaarta weyn ee BOQORKA. Haddii aadan aqoon waxa la sameeyo oo aadan rabin inaad lacag badan ku qarashgareyso maskax feker oo keeneysa fikrado asal ah oo lagu bilaabi karo cayaaraha, waxaad siisaa leexleexashadaas lacagta badan sameysay iyo in taageerayaashaadu hubaal sugayaan cinwaan kale oo wakhti fiican kula leh shimbiraha yaryar ee waalan.
1 Shimbiraha careysan xujo
2 Halxiraalo iyo xujooyin badan
3 Tayada farsamada
Shimbiraha careysan xujo
Ma ahan markii ugu horeysay ee Rovio waxay ku socotaa xujooyinka si uu noo tuso in qaybtan uu waliba ogyahay sida loo qorsheeyo ciyaaraha xiisaha leh. Nibblers wuxuu ahaa mid kale cinwaanka ay soo saartay shirkaddan, in kasta oo ay mar kale ku sii jirtay nuqul kale oo keliya oo ah guusha Boqortooyada taasna waxay u oggolaatay inay iibsato shirkadda weyn ee 'Activision Blizzard'.
Nooca noocan ah wuxuu u shaqeeyaa si aad u wanaagsan, maadaama uu ku habboon yahay baahiyaha adeegsadayaal badan oo raadinaya a ciyaar caadi ah oo tayo sare leh muuqaal ahaan, in ay leedahay animations madadaalo iyo madadaalo leh, iyo in ay ku leedahay heerar badan oo ay ku kordhin karto waqtiga ciyaarta. Halkani waa halka uu ka dhacayo Qaraxa shimbireed ee qumman, maxaa yeelay waxay leedahay dhammaan sifooyinkaas si aad waqti fiican ugu heli karto xoogaa farsamoyaqaano aad u fudud oo toosan, maaddaama oo ay jiraan waxyaabo fudud oo fudud oo aan ku mari karno dhammaan heerarkaas.
Halxiraalo iyo xujooyin badan
Waa inaan gujino saf saf dusiyeen oo midabbo isku mid ah ka dhigaysa inay baaba'aan oo ay helaan qodobbadaas lagama maarmaanka u ah inay u gudbaan heerka ku xiga. Waxaan si fudud ku heli doonaa inaan dhameystirno xaddiga ugu yar ee marmarka midabada leh ee aan u baahanahay iyo, in ka badan ama ka yar, kani waa ciyaarta ciyaarta ee fiidiyowgaan.
Haddii aan awoodno abuuro iskudhafyo waaweyn Astaamo ahaan, waxaan ku heli karnaa astaamo gaar ah oo noqon doona dhammaan bambooyin la qaadan doona kuwa ku dhow. Waad isticmaali kartaa xoog-kicinta ciyaarta ka hor, waxaadna yeelan doontaa tiro xaddidan oo furayaasha ah si aad u dhammaysato heerka intaadan ka dhammaan.
Ciyaar leh a buena calidad, laakiin taasi waxay mar kale tahay xarig isku mid ah oo had iyo jeer leh qaybtaan: midabada, animations iyo heerar badan. Dabcan, waxaad yeelan doontaa jilayaasha waalida ee Rovio oo umuuqda kuwo qosol badan mararka qaarkood. Waxaad ku haysataa bilaash Dukaanka Play-ka oo leh nooca freemium ee muuqda.
Qarxinta shimbiraha careysan runti uma taagna wax, maaddaama noocaan oo kale ah calaamadaha muuqda ee gaarka ah ee sawirada, animations-ka oo bixiya firfircoonaan, iyo tiro badan oo heerar ah oo aan horeyba uga barannay ciyaaraha kale lama waayi karo. Haa, badan oo isku mid ah.
Shimbiraha Ukriga ah
Dhaqdhaqaaqa muuqaalka muuqaalka iyo animations
Hayso shimbiraha waalan
Inbadan oo isku mid ah
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Qarxinta Shimbiraha Xanaaqsan ayaa ah nooca loo yaqaan 'Candy Crush Candlo' oo uu hindisay Rovio
5-ta war ee ugu wanaagsan Telegram ee sanadka 2016